Fekitori inopa Round yakasarudzika kenduru gaba bhokisi, China Fekitori inopa yakakomberedza yakasarudzika kenduru tin bhokisi Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - G STAR KUTENGA LIMITED
Imba>Tin Can Mabhokisi>Mhuri pasuru gaba rinogona
Model Number: TB0047
Iyi kenduru kenduru tinosangana nezvinodiwa zvepasi rese zvekuchengetedza chikafu, inogona kubata zvakananga chikafu, uye inogona kupasa bvunzo dzakasiyana dzekuchengetedza chikafu. Zvese zvigadzirwa zvedu zvakapfuura SGS, Intertek uye kumwe kuongorora kwechitatu-bato kakawanda uye zvinosangana nezvinodiwa zvekudya zvakachengeteka.
Product Name yakasarudzika simbi isina musono kenduru tin kesi chipo bhokisi
zera 95 * 65 (H) MM
Delivery Time anenge 30-35days mushure mekubvumidzwa kwemuenzaniso uye kugamuchira
Shandisa kurongedza kenduru uye zvimwe zvipo zvezvipo
4. Iyo kambani ine makore mazhinji echiitiko mukuburitsa kunze mabhokisi etini. Zvigadzirwa zveTinplate senge dzakasiyana siyana magaba echikafu, mabhokisi ezvipo, nezvimwewo vari kutengesa zvakanaka muEurope, America nedzimwe nyika.
7. Kune gumi mainjiniya mainjiniya patini yekugadzira, ayo anonyatso kusangana nezvinodiwa nevatengi pakugadzira tini magaba.